Dagaal khasaaro gaystay oo ciidamada dawladda iyo Al-shabaab ku dhaxmaray Buulo-barde. [Akhris …] – Radio Daljir
Dagaal khasaaro gaystay oo ciidamada dawladda iyo Al-shabaab ku dhaxmaray Buulo-barde. [Akhris …]
Agoosto 20, 2009 12:00 b 0
Buulo-barde, Aug 20 – Dagaal xooggan oo u dhaxeeyey ciidamada dawladda KMG ah ee Soomaaliya iyo kuwa ururka Al-shabaab, ayaa maantay ka dhacay degmada Buulo-barde ee gobolka Hiiraan.
Dagaalkaan oo labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan ayaa bilowday waabarigii hore ee saakay kadib markii ciidamo ka tirsan dawladda KMG ah ee Soomaaliya oo ka jarmaaday magaalada Beledweyn, ay weerar ku ekeeyeen degmdaasi oo ay gacanta ku hayeen xarakada Al-shabaab.
Dagaalka ayaa la sheegayaa in uu gaystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac iskugu jira oo sida la tilmaamayo labada dhinacba soo kala gaartay, waxaana wararka aan ka helnay dadka deegaanka Buulo-barde ay sheegayaan in halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof halka tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen.
Dagaalka ayaa la tilmaamayaa in uu joogsaday saaladdii duhur kadib, waxaana ciidanka dawladda u suurtoobi weyday in ay qabsadeen degmada Buulo-barde oo ay markii hore u weerareen in ay la wareegaan maamulkeeda, iyagoo dib ugu laabtay halkii markii hore ay ka soo duuleen ee magaalada Beledweyn.
Xaaladda degmada Buulo-barde ayaa la tilmaamayaa in hadda laga dareemayo xiisad colaadeed oo aad u kacsan, waxaana dadka shacabka ahi qaarkiis isku diyaariyey in ay ka qaxaan magaalada oo laga cabsi qabo dagaal mar kale ka qarxa.
Dhanka kala magaalada Beledweyn, ayaa iyana caawa laga soo sheegayaa xaalad deganaasho la?aaneed kadib markii meel u jirta 10KM ay yimaadeen ciidamo Itoobiyaan, waxaana laga cabsi qabaa dagaalada hadda gobolkaasi ka soo cusboonaaday in ay saamayn ku yeeshaan magaalada Beledweyn oo meelo ka mid ah farriisimo ay ku leeyihiin xoogagga dawladda ku kacsan.
Warbixin ku saabsan wadahadalada madaxda Puntland & waftiga dawlada federaalka ah ee Somaliya. [Dhegaysi …]